०.८७ % ले घट्यो बजार, कुल ३ अर्ब ६३ करोडको कारोबारमा नबिल बैंकको सर्वाधिक हिस्सा
असोज २५, काठमाडौं । साताको दोस्रो कारोबार दिन सोमवार नेप्से परिसूचक अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा शून्य दशमलव ८७ प्रतिशतले घटेको छ । २ हजार ६६७ दशमलव ५९ विन्दुबाट शुरु भएको बजार २३ दशमलव १९ अंकले घटेर २ हजार ६३९ दशमलव ३७ विन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ ।
यस अवधिमा कारोबारमा आएका २१९ ओटा धितोपत्रको ९३ लाख १४ हजार ७८० कित्ता शेयरको ४४ हजार ४६२ पटकमा रू. ३ अर्ब ६३ करोड ९४ लाख ६८ हजार बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ । यस दिन सेन्सेटिभ इण्डेक्स ५ दशमलव ५६ अंक घटेको छ ।
यस दिन कुल कारोबारमा आएका धितोपत्रमध्ये ग्लोबल आइएमई समुन्नत योजना-१ को इकाईमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ । उक्त योजनाले इकाईधनीहरुका लागि १०० प्रतिशत (करसमेत) नगद लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेसँगै इकाईमूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको हो ।
शतप्रतिशत प्रतिफल सार्वजनिक भएसँगै यस योजनाको इकाईमूल्य ९ दशमलव ९० प्रतिशत अर्थात् प्रतिइकाई रू. १ दशमलव ९५ ले बढेर अन्तिम इकाईमूल्य रू. २१ दशमलव ६५ कायम भएको छ ।
त्यसैगरी महालक्ष्मी विकास बैंक र र रैराङ हाइड्रोपावरको शेयरमूल्य सर्वाधिक ८ दशमलव ७६ र ८ दशमलव २९ प्रतिशतले घटेको छ ।
यो दिन सर्वाधिक शेयर खरीदविक्री नबिल बैंकको रू. १७ करोड १३ लाख ८५ हजार बराबरको भएको छ । कारोबार रकमकै आधारमा सर्वाधिक कारोबार हुने दोस्रो कम्पनीमा हिमालयन डिष्टिलरी रहेको छ । उक्त कम्पनीको प्रतिकित्ता रू. ६ हजार ८८५ मा रू. १६ करोड ९२ लाख बराबरको शेयर खरीदविक्री भएको छ ।
यस दिन कारोबारमा आएका १३ ओटा समूहको परिसूचकमध्ये म्युचुअल फण्ड र लगानी समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ३८ र १ दशमलव शून्य ७ प्रतिशतले बढेको छ भने बाँकी सबै समूहको परिसूचक घट्दा समग्र नेप्से घटेको हो । जसमध्ये अन्य समूहको परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव २१ प्रतिशतले घटेको छ ।
त्यसैगरी, बैंकिङ समूहको परिसूचक शून्य दशमलव ८७ प्रतिशत, व्यापार समूहको २ दशमलव १२ प्रतिशत, होटल्स एण्ड टुरिजम समूहको शून्य दशमलव ६२ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको परिसूचक १ दशमलव ३५ प्रतिशत, हाइड्रोपावर समूहको १ दशमलव १९ प्रतिशत, वित्त समूहको १ दशमलव ८३ निर्जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशतले घटेको छ ।
यसैगरी, उत्पादन तथा प्रशोधन समूहको शून्य दशमलव २९ प्रतिशत, लघुवित्त समूहको १ दशमलव २६ प्रतिशत, जीवन बीमा समूहको शून्य दशमलव २७ प्रतिशतका दरले घटेको छ ।
गत साताको अन्तिम दुई कारोबार दिनमा १०० अंकभन्दा बढी बढेको बजार आइतवारदेखि लगानीकर्ताहरु प्रोफिट बुक गर्न लागेसँगै नेप्से घट्न पुगेको देखिन्छ ।